China မီးဖိုချောင်သုံးရေချိုးခန်း silicone ဖျော်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - GNS
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မီးဖိုချောင်ရေချိုးခန်းဆီလီကွန် Sealant
မီးဖိုချောင်ရေချိုးခန်း Silicone Sealant G33 သည်စိုထိုင်းဆမြင့်မားသောဒေသများရှိရေချိုးခန်းများ၊ ရေနစ်မြုပ်များ၊ ရေပန်းများနှင့်ရေကူးကန်များရှိအဆစ်များကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက်အရည်အသွေးမြင့် acetic silicone sealant ဖြစ်ပြီးမိလ္လာနှင့်ရေပေးဝေရေးစနစ်၊ PVC ပိုက်များနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများ၊ ပန်းကန်ချုပ်၊ ကွန်တိန်နာတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ၁၈ နှစ်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရ GNS ထုတ်ကုန်များကိုအာရှ၊ တောင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊
မီးဖိုချောင်သုံးဆီလီကွန် SEALANT ၏မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း၏လက်ရာလက္ခဏာ
- အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ silicone sealant အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ ရောစပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သာမန် caulking သေနတ်နှင့်အတူထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
- ဖန်၊ ကြွေထည်မြေထည်၊ anodized aluminium၊ သစ်နှင့် polycarbonate တို့အတွက်အထူးကော်များ - မှိုဆန့်ကျင်သည့်အပိုပစ္စည်းများ။
•မှိုနှင့်မှိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သဘာ ၀ သိုက်များပါဝင်သည်။
- မြင့်မားသော elastic curing ပြီးနောက်၊ ၂၀ မှ ၂၀ မှ + ၂၀ အထိပုံပျက်သောအဆစ်များအတွက်သင့်တော်သည်။
- မလှုပ်ရှားမှု၊ ဒေါင်လိုက်နှင့် overhead အဆစ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2. မီးဖိုချောင်သုံးဆီလီကွန်တံဆိပျ၏ 2.PROUCT PARAMETER (အထူးပြု)
စမ်းသပ် Parameter ယူနစ် ရလဒ်
ပေးသွင်းသည်အတိုင်း 23' 'ƒနှင့် 50% RH မှာစမ်းသပ်
တိကျသောဆွဲငင်အား ဂရမ် / ml 0,96 ± 0,02
စီးဆင်းမှု (sag သို့မဟုတ် slump) မီလီမီတာ 0
Extrusion နှုန်း ml / မိနစ် 150
အရေပြားအချိန် မိနစ်5~ 10
ကိုင်တွယ် - အခမဲ့အချိန် နာရီ ‰‰1.0
ကုသချိန် (၅ မီလီမီတာ) နာရီ ‰¤12
ကုသပြီးနောက် ၂၁ ရက်နှင့် ၂၃ ရက်နှင့် RH 50% အရ
Durometer မာကျောမှု, Shore တစ် ဦး က အမှတ် 22
လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည် % ± 25
ဆန့ / ကိန်းပကတိတန်ဖိုး 50% elongation မှာ Mpa 0.24
ဆန့ / ကိန်းပကတိတန်ဖိုး 100% elongation မှာ Mpa 0.28
ဆန့်စွမ်းအား Mpa 0.32
ချိုးမှာအဆုံးစွန် elongation % 250
မီးဖိုချောင်သုံးဆီလီကွန်တံဆိပ်ခတ် 3. 3. လျှောက်လွှာ
- ဆီ၊ ဖုန်နှင့်အမဲဆီများမှသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့သောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ silicone မသုံးခင်လုံးဝခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ။
- တံဆိပ်ခတ်သည့်အရာတစ်ခုကိုတံဆိပ်ခတ်ထားပါ။ ၄၅ ဒီဂရီထောင့်တွင် nozzle ကို ဖြတ်၍ အဖွင့်အပိတ်၏အရွယ်အစားအတိုင်းဖြတ်ပါ။ အဆိုပါ nozzle သည့်အရာတစ်ခု၏ထိပ်မှဝက်အူ။
- အရာတစ်ခုကို caulking gun ထဲသို့ထည့်ပါ။
- 45 °ထောင့်ရှိ caulking gun ကိုကိုင်ထားပါ။ ပူးတွဲဆန့်ကျင် nozzle အဖွင့်ကိုနှိပ်ပါ, caulking သေနတ်မှန်မှန်ဖိအားလျှောက်ထားနှင့်ကွက်လပ်သို့ sealant အတင်းအကျပ်ဆီလီကွန် sealant extrude နှင့်တ ဦး တည်းချောမွေ့လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပူးတွဲတစ်လျှောက်တွန်းအားပေးရွေ့လျားမှုအတွက်ရွှေ့။
--Sealant သည် ၄၈ နာရီအတွင်းအပြည့်အဝကုသပါလိမ့်မည်။ ဤအချက်အနေဖြင့်မလိုလားအပ်သော sealant များကိုချွန်ထက်သောဓါးဖြင့်ချုံ့ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သို့သော်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။
မီးဖိုချောင်သုံးဆီလီကွန်တံဆိပျ၏ 4. သိုလှောင်မှုနှင့်သက်တမ်းအသက်
(၂၅) နှစ်အောက်အေးသောခြောက်သွေ့သောနေရာများတွင်သိုလှောင်သည့်အခါထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှ ၁၂ လကြာသိုလှောင်နေစဉ်အပူအရင်းအမြစ်နှင့်နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်မသွားပါစေနှင့်။
၆။ မီးဖိုဆောင်ဆီလီကွန်တံဆိပျမြားကိုထုပ်ပိုးခြင်း၊ သဘောင်္တင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
ထုပ်ပိုးခြင်း - အရာဝတ္ထု ၂၂၀ မှ ၃၀၀ မီလီမီတာ၊ ဝက်အူချောင်း၏ ၅၉၀ မီလီမီတာ ၆၀၀ မီလီမီတာ၊ ဗုံ ၁၉၀ လီတာ။ အရာတစ်ခု 24 ctgs / ctn, ဝက်အူချောင်း၏ 20 pcs / ctn ။ (အထူးသတ်မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ )
သင်္ဘောတင်ခြင်း: ပင်လယ်၊ လေကြောင်းနှင့်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
၀ န်ဆောင်မှု: ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ဒီဇိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ သင်သည်အရောင်းအ ၀ ယ် ၀ န်ဆောင်မှုရရှိလိမ့်မည်။ သင်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုသောအခါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုသည်။
A: အခြေခံပစ္စည်းသည် silicone sealant နှင့်မကိုက်ညီပါသို့မဟုတ် silicone sealant ကိုအသုံးပြုသောအခါအခြေခံပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြွန်အချို့ရှိပါသည်။ ဒီဖြစ်ပျက်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်။ silicone sealant ကိုအသုံးမပြုခင် ကျေးဇူးပြု၍ အခြေခံပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းသပ်ရပ်။ သဟဇာတဖြစ်အောင်စစ်ဆေးရန်အကြံပြုပါသည်။
silicone sealant မှအပအခြားမည်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွပေးနိုင်ပါသလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် PU Foam၊ MS Sealant, Marble Glue, Two-Component Epoxy ကော်၊ Two-component Insulating Foam များကိုထုတ်လုပ်သည်။
hot Tags:: အရောင်းဆိုင်၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ အရည်အသွေးကောင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပေးသွင်းသူများ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ၊
အစာရှောင်ခြင်းရောဂါပျောက်ကင်းဆီလီကွန် sealantသန့်ရှင်းသော silicone sealantမှိုဆန့်ကျင်သောမှို silicone sealantAntihongus silicone sealantပibိဇီဝဆေး silicone sealantရေချိုးခန်းမီးဖိုချောင်ဆီလီကွန် sealant
သန့်ရှင်းရေးမှို Anti-မှို Silicone Sealant
TVS နှင့် Butt Joint Silicone Sealant
Aquarium ဆီလီကွန် Sealant
high-temp 265â ic Silicone Sealant